Ngwa 5 iji dezie foto na gam akporo nke ga-eju gị anya Gam akporosis
Igwe ọhụụ ọ bụla na - apụta n'ahịa, igwe foto ha na - agbakwunye nwere ike ịnye anyị ọtụtụ foto dị mma. Nke ukwuu nke na, ma e wezụga n'ihe banyere ndị kasị adịchaghị ma ọ bụ ọkachamara dijitalụ ese foto, ole na ole na ndị ọrụ nwere igwefoto na mgbakwunye na ama hana. Taa, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ na-eji ekwentị mkpanaaka were foto anyị (na vidiyo); Anyị na-ewere ọtụtụ foto ndị ọzọ ma ndị a dị egwu, agbanyeghị, ọ nwekwara ike ịkwalite na ọbụlagodi ịnye ha anya mbụ.
Maka nke a, e nwere ọtụtụ narị ngwa iji dezie foto dị na Playlọ Ahịa Google. Na mgbakwunye, enwere ụdị ha niile, site na ndị ọkachamara ruo na nke kachasị mfe, n'efu ma ọ bụ akwụ ụgwọ, ị nwere ike belata, gbanwee tamale, gbakwunye nzacha na ọtụtụ nsonaazụ, gụnyere ederede, nkpuchi, mkpịsị emojis, emojis…. Ka o sina dị, ndepụta ahụ enweghị njedebe. Agbanyeghị, taa, anyị ga-agba mbọ igosi gị ihe nwere ike ịbụ ụfọdụ n'ime ihe kacha mma foto na-edezi ngwa ọdịnala na gam akporo. Ekwenyesiri m ike na ị gaghị ekwenye na nhọrọ a, yabụ egbula oge ime anyị amụma gị na ngalaba nkọwa.
3 PhotoDirector-Igwefoto & Editor
5 Lablọ nyocha
Site na otutu edezi nhọrọ na ọ na-enye, na maka ya nnukwu ịdị mfe nke iji, Snapseed ike na-efu efu site na ndepụta nke kacha mma foto edezi ngwa. Ọ bụ ngwa kpamkpam enwerela onwe ya, nke na-abịa site n'aka Google n'onwe ya, na nke anyị agaghị ahụ ọbụlagodi mgbasa ozi.
Anyị nwere ike iji ya gbanwee ọdịiche, nchapụta ma ọ bụ ilekwasị anya nke foto anyi, tinye otutu mmetụta na nzacha, na ọbụna tinye ederede. Ihe na-efu mgbe niile, dịka ọmụmaatụ ụdị ederede dị iche iche, ọtụtụ nzacha ... Ma n'agbanyeghị nke ahụ, ọ ka bụ ọkacha mmasị m.
Ihe ọzọ a na-eji edezi foto na gam akporo bụ "VSCO". Iji ya i nwere ike see foto site n’itinye ihe atumatu obula enyere; O nwekwala njikwa dị elu ma na-agụnye ụfọdụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya ka ọ na-enye gị ohere ịkekọrịta ihe okike gị ma ọ bụ hụ ọrụ ndị obodo mere.
N’enweghị mgbagha ihe kachasị mma banyere VSCO bụ nzacha ya, ọtụtụ n'ime ha sitere na fim, nke na-enye aka dị mkpa ma dị mma, mana anaghị amanye ya, na anyị chọrọ maka onyonyo anyị.
PhotoDirector-Igwefoto & Editor
Ngwa "PhotoDirector-Camera & Editor" ga-amacha gị nke ọma, agbanyeghị, ọ nwekwara ike bụrụ akụkụ nke klọb ahọpụtara nke ndị editọ foto kacha mma maka gam akporo.
N'akụkụ na-adịghị mma anyị nwere ike ịkọwa ọnụnọ nke mgbasa ozi (nke ị nwere ike ime ka ọ kwụsị n'anya ịkwụ ụgwọ) yana na o nwere obere ọrụ na ngwaọrụ karịa ngwa ndị ọzọ nke otu ụdị; Ọzọ, nsonaazụ ya dị mma ekele maka mmezi ya, blurs, enwere ike ihichapụ ihe na ihe (na ndi mmadu) na ị chọghị ịpụta na foto gị.
Ọ bụkwa otu isi na ihu ọma ya na o nwere a nnọọ kensinammuo na mfe iji interface, o nwere mmetụta preset, ngwa na mfe ụda mgbanwe, na ndị ọzọ.
PhotoDirector - Onye nchịkọta akụkọ foto
Developer: Berlọ nyocha Cyberlink
Enweghị ike ịgụnye ngwa a n'etiti ndị editọ foto kacha mma maka gam akporo yana maka iOS. Ya interface bụghị dị ka kensinammuo ka nke gara aga ngwa Otú ọ dị, na-enye ohere ka nnọọ mma ịchịkwa foto. Ọ nwere presets na ị nwere ike ide na otu aka, na elu ntọala. You nwere ike nnwale na mgbanwe na nsonaazụ dị ka ịchọrọ na enweghị nchegbu, n'ihi na n'oge ọ bụla ị nwere ike ịlaghachi na nke mbụ.
Na anyị rụchaa na «Photo ụlọ nyocha», ihe incredibly mfe na-eji foto nchịkọta akụkọ maka gam akporo. Ọ nwere nnukwu ego nke nzacha, mmetụta, photomontages, collages, frames na ị nwere ike itinye aka na foto gị iji nye ha akụkụ nke mbụ na, karịa ihe niile, ihe na-atọ ụtọ. Karịsịa ihe kwesịrị ịrịba ama bụ ụdị "Artistic Fund" nke ị ga-eji nweta nsonazụ dị egwu. Ọ nwere mgbasa ozi ma ọ bụrụ na ọ kwenye gị, ịnwere ike iwepu ha site na ịzụta pro pro.
Ụlọ nyocha foto: onye na -ese foto
Developer: Linerock itinye ego LTD
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa 5 iji dezie foto na gam akporo nke ga-eju gị anya
Egwuregwu kacha mma Final Fantasy maka gam akporo